Ra’iisul wasaare Kheyre oo dhiiri-geliyey ciidamada howlgalka hubka kusoo ururiyey (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Kheyre oo dhiiri-geliyey ciidamada howlgalka hubka kusoo ururiyey (SAWIRO)
Ra’iisul wasaaraha xukuumada federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa maanta booqday xarunta ciidamada wadajirka ah ee fulinaya qorshaha xasilinta caasimada Muqdisho ka dib howlgal ay saakay sameeyeen oo ay kusoo qab-qabteen hub iyo aalado kale.
Sidoo kale, ra’isul wasaaraha ayaa shacab iyo arday la fariistay goobaha shaaha lagu cabo ee degmada Wardhiigley, isagoo la sheekeystay dhalinyaradii iyo ardeydii halkaas ku sugneyd.
Ra’iisul wasaare Kheyre oo hadal dhiiri-gelin ah u jeediyey ciidamada howlgalka Muqdisho ayaa ku ammaanay doorkooda geesinimada leh oo ay u istaageen inay shacabka Soomaaliyeed amnigooda iyo xasilloonidooda sugaan.
Ciidanka ayaa sidoo kale isla maanta howlgal kaa la mid ah ka sameeyey degmada Shingaani oo ay baaris ku sameeyeen goob hubka lagu sameeyo, laguna gado.
Ciidanka ayaa la soo wareegay qalabkii sameynta hubka iyo kuwii hubka looga baabi’inayey numberkooda. Waxaan goobtaas laga soo helay 2 Qori iyo 3 Bistooladood.